May 2021 - Super Union
ခတျေသဈ ဇောတိက သူဌေး ( သို့မဟုတျ ) အလုပျသမား ( ၃၀ ) ကြျောလုံးကိုတဈယောကျ ဆယျသိနျးစီပေးဝတေဲ့အလုပျရှငျ
ခတျေသဈ ဇောတိက သူဌေး ( သို့မဟုတျ ) အလုပျသမား ( ၃၀ ) ကြျောလုံးကိုတဈယောကျ ဆယျသိနျးစီပေးဝတေဲ့အလုပျရှငျ အလုပျသမား ၃၀ ကြျောလုံးကို တဈယောကျ ဆယျသိနျးစီ ပေးဝတေဲ့ အလုပျရှငျဒီနေ့ တပညျ့တှကေိုမုနျ့ဖိုး …
31/05/2021 By fella News
ရွှေထက်ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိသော စပျစ်သီးစေ့ ( သို့မဟုတ် ) စပျစ်သီးစားပြီး ရင် မလွင့်ပစ်သော စပျစ်စေ့
ရွှေထက်ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိသော စပျစ်သီးစေ့ ( သို့မဟုတ် ) စပျစ်သီးစားပြီး ရင် မလွင့်ပစ်သော စပျစ်စေ့ လူအများစု မစားဖြစ်ပဲ ထွေးထုတ်နေမိတဲ့စပျစ်သီးအစေ့လေးတွေအကြောင်း။ စပျစ်သီး အစေ့ရဲ့ အရသာက ခါးသက်သက် စားရတာကလည်း မာဆတ်ဆတ်နဲ့ဆိုတော့ စပျစ်သီးစားတိုင်း …
ယနေ့ ခေတ်မှာ လူတိုင်းမသိကြတော့တဲ့ ရာသီအလိုက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ..စတင်စိုက်ပျိုးသင့်တဲ့အချိန်
ယနေ့ ခေတ်မှာ လူတိုင်းမသိကြတော့တဲ့ ရာသီအလိုက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ..စတင်စိုက်ပျိုးသင့်တဲ့အချိန် သေချာဖတ်ထားကြပါ (၁) ဗူး… ကဆုန် မှ…နယုန်လအတွင်း။ (၂) သခွား… တန်ခူး မှ…နယုန်လအတွင်း။ (၃) ပဲတောင့်ရှည်… တန်ခူး မှ…ဝါခေါင်လအတွင်း။ (၄) ခဝဲ… …
သင့်ဘဝ တလျောက်လုံး သင့်လက် ထဲမှာ ပိုက်ဆံမပြတ်အောင်သိထားသင့်တဲ့ အဖိုးတန်နည်းလမ်း (၄) မျိုး
သင့်ဘဝ တလျောက်လုံး သင့်လက် ထဲမှာ ပိုက်ဆံမပြတ်အောင်သိထားသင့်တဲ့ အဖိုးတန်နည်းလမ်း (၄) မျိုး တစ်လတာဝင်ငွေကို စုမိဖို့နေနေသာသာ လကုန်ခါနီးတာနဲ့ လက်ထဲငွေမလောက်တာမျိုး ကြုံကြိူက်ဖူးမှာပါ။ ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက် ငွေယိုပေါက်တွေကို သေချာရှာဖွေပြီး လစဉ်စုမယ့်ငွေပမာဏကို (အနည်းအကျဉ်းဖြစ်စေ)သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။ မြင်သမျှ ၀ယ်ချင်နေပါက …
31/05/2021 By fella Knowledge
⭕️ ရဲနှင့် စစ်သားတို့၏ သစ္စာလေးချက် ⭕️ ( ⭕️ ပြည်သူ့ဘက်ရပ်တည်ခြင်း က နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူအပေါ် သစ္စာရှိခြင်းပါ ⭕️)
⭕️ ပြည်သူ့ဘက်ရပ်တည်ခြင်းက နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူအပေါ်သစ္စာရှိခြင်းပါ ⭕️ ⭕️ ရဲနှင့် စစ်သားတို့၏ သစ္စာလေးချက် ⭕️ ( ⭕️ ပြည်သူ့ဘက်ရပ်တည်ခြင်း က နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူအပေါ် သစ္စာရှိခြင်းပါ ⭕️) ——————————— …
နွေဦးတော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲဝင် ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ တော်လှန်ရေး ရဲမေ တစ်ယောက် ရေး တဲ့ “ စာ ” …
နွေဦးတော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲဝင် ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ တော်လှန်ရေး ရဲမေ တစ်ယောက် ရေး တဲ့ “ စာ ” … ငိုမနေနဲ့ လူတွေသေနေပြီ”” ထ”” ဘယ်အရာမဆို မထိုးဖောက်ပဲ ငြိမ်နေရင် ငြိမ်တဲ့နေရာ …
လွိုင်ကော်က အမတစ်​ယောက်ရဲ့ စစ်ရှောင်စခန်းက ရေးတဲ့စာ….. (ကလေးလေးတွေ ရဲ့အတွေးတွေအတိုင်း ဖြစ်လာ နိုင်ကြပါစေ )
လွိုင်ကော်က အမတစ်​ယောက်ရဲ့ စစ်ရှောင်စခန်းက ရေးတဲ့စာ….. (ကလေးလေးတွေ ရဲ့အတွေးတွေအတိုင်း ဖြစ်လာ နိုင်ကြပါစေ ) 👩‍🔬👩‍🔬👨‍🔬👨‍🔬👩‍🔧👩‍🔧👨‍🔧👨‍🔧👩‍🔬👩‍🔬👩‍🔬👨‍🔬👨‍🔬👩‍🔧👩‍🔧👨‍🔧👨‍🔧 စစ်​ရှောင်​ပြေးတဲ့ ပထမညမှာ​ပေါ့…… အ​ရေး​ပေါ်ကယ်ဆယ်​ရေး စခန်းတစ်ခုရဲ့ Hall တစ်ခုထဲ … မိခင်​တွေ…. ကိုယ်စီ ဗျာပါ​တွေနဲ့ …
အမေရိကန်လက်နက်ရောင်းချမှု ပုံစံနှင့် စည်းမျဉ်းများကို ရှင်းပြခြင်း ( အရပ်သားတွေနားလည်မည့် စကားလုံးတွေဖြင့် ရှင်းပြထားပါတယ်……..)
အမေရိကန်လက်နက်ရောင်းချမှု ပုံစံနှင့် စည်းမျဉ်းများကို ရှင်းပြခြင်း ( အရပ်သားတွေနားလည်မည့် စကားလုံးတွေဖြင့် ရှင်းပြထားပါတယ်……..) အမေရိကန်လက်နက်ရောင်းချမှု ပုံစံနှင့် စည်းမျဉ်းများကို ရှင်းပြခြင်း ဆိုတဲ့ စာတမ်းဖတ်ပွဲ တခုကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တုန်းက အမေရိကန်ရေတပ်ကောလိပ် ( ဝါရှင်တန်ဒီစီ) …
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့အခါ အဓိကကျတဲ့ အချက်တွေကို မမေ့ပါနဲ့ ( ပြောက်ကျားစနစ်၏ အဓိက အခြေခံ ၁၀ ချက် )
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့အခါ အဓိကကျတဲ့ အချက်တွေကို မမေ့ပါနဲ့ ( ပြောက်ကျားစနစ်၏ အဓိက အခြေခံ ၁၀ ချက် ) ပြောက်ကျားစနစ်၏ အဓိက အခြေခံ ၁၀ ချက် –  ဘယ်တော့မှ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးမတိုက်ပါနဲ့ …
အမေရိကန် သံရုံးက အန္တာရယ် အရှိဆုံး နေရာများအဖြစ် သတ်မှတ် ပေးလိုက်တဲ့ ရန်ကုန်မြု့နယ် ( ၆ ) မြို့နယ်… ( ဘယ်မြိုနယ်တွေဖြစ်မလဲ….)
အမေရိကန် သံရုံးက အန္တာရယ် အရှိဆုံး နေရာများအဖြစ် သတ်မှတ် ပေးလိုက်တဲ့ ရန်ကုန်မြု့နယ် ( ၆ ) မြို့နယ်… ( ဘယ်မြိုနယ်တွေဖြစ်မလဲ….) ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ အမေရိကန် သံရုံးက သံရုံးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ တကွ အမေရိကန် …